🥇Barhwebi beeNtengiso zeoyile abaBalaseleyo ngoJanuwari 2022 | Isikhokelo saSimahla sokuThengisa!
Abarhwebi beeNtengiso zeoyile abagqwesileyo 2022
If Ukuthengisa ioyile ivakala ngathi yinto onokuba nomdla kuyo, emva koko uhlale kanye apho ukhoyo. Siza kuphonononga ukuba i-oyile ithengiswa njani, gubungela amacebo adumileyo kwaye ngokuqinisekileyo - xoxa abathengisi abagqwesileyo beoyile ngo-2022.
Ubungakanani bam boRhwebo
€ 20 (0.0002 amaqashiso)
Ababoneleli aba-7 abafana nezihluzo zakho
Imfundo kunye neeWebinars
Iitshathi kunye neZixhobo
Max. Ukufumana amandla
1 okanye ngaphezulu
Abasebenzisi abatsha abangama-489 namhlanje
YeEUR / JPY
IGBP / USD
IGBP / JPY
Imirhumo kunye nee-Asethi
I-72% yee-akhawunti zokuthengisa ezithengisayo zilahlekelwa yimali xa kuthengiswa ii-CFDs kunye nalo mthengisi.
Layisha ngakumbi +
Izinto ezisisiseko zokuThengisa ioyile
Amandla afana namalahle kunye neoyile agcine umhlaba ujika iminyaka emininzi. Nangona kunjalo, ishishini leoyile lwanamhlanje esaziyo ngoku linokulandelwa emva phaya emva kwexesha nge-1830s xa uguquko lweshishini luqale.
Ukukhawulezisa ukuya kwi-2022 kunye neoyile yenye yezona zinto zinokuthengiseka kakhulu ezikhoyo. Ehlabathini jikelele, sisebenzisa izigidigidi ezingama-95 zemigqomo yonke imihla! Ukubonelela kunye nokufunwa yenye yezinto eziphambili xa kuziwa kwixabiso leasethi, ke ioyile ihlala ibona ukuhla kwamaxabiso amakhulu.
Ngaba uyawathanda amathuba akho ekuthengiseni le mveliso yorhwebo? Iindaba ezimnandi zezokuba le asethi ayisekho igcinelwe iimarike ezinkulu okanye abarhwebi bamaziko kunye neengxowa-mali ngokufanayo. Ngokulandela izikhokelo ezifana nezethu kunye nokuqhuba uphando lwakho uya kuthengisa ioyile njengepro ngaphambi kokuba uyazi!
Ngaphaya koko, ngenxa yokutshintsha kwexabiso elikhulu kwintengiso, kuluncedo kubarhwebi bexesha elifutshane. Xa kuthengiswa le yorhwebo kwi-Intanethi, abarhwebi bayakwazi ukwenza inzuzo kwiimarike ezikhulayo, kunye naxa iasethi yehla ngexabiso.
Masiqale ngokuntywila ngqo kwisiseko sokuthengisa seoyile. Xa uthengisa ioyile ujonge ukuthelekelela ngokuchanekileyo ukuba ixabiso leoyile liza kunyuka okanye lihle. Ixabiso layo nayiphi na i-asethi ikakhulu lixhomekeke kunikezelo nakwimfuno yentengiso.
Xa kukho umthamo ophakamileyo wabantu abathenga ioyile kunokuba beyithengisa- ixabiso liya kunyuka. Ngokuchasene noko, xa abantu abaninzi bethengisa ioyile- ixabiso liya kuwa. Abathengisi abanamava kwisithuba bathambekele ekusebenziseni ngokupheleleyo la maxabiso atshintshayo.
Kwabo abangaziyo, masikunike umzekelo osebenzayo wendlela urhwebo lweoyile olusebenza ngayo:
Ioli ye-Brent ekrwada icatshulwe kwi-37 yeedola ngomgqomo
Uziva ukuba eli xabiso liza kunyuka
Ngale nto engqondweni, ubeka kuthenga iodolo enexabiso le- $ 500
Uqikelele ngokuchanekileyo- I-oyile ekrwada yeBrent ngoku inexabiso ngeedola ezingama-56
Oku kunyuka kwamaxabiso kusibonisa ukuba ixabiso leoyile ekrwada eBrent lenyuke nge-61.35%
Ngenxa yoko, uthatha isigqibo sokubeka i- thengisa Ukutshixa inzuzo yakho
I-oda yakho ngoku ixabisa i-806.75 yeedola
Ukusuka kwisibonda sakho seedola ezingama-500, wenze i-306.75 yeedola kolu rhwebo
Njengoko ubona kumzekelo wethu, wenze isigqibo esifanelekileyo-ke wenze inzuzo esempilweni eyi- $ 306.75.
Ukufikelela kwiimarike kwaye uqalise ukurhweba ngeoyile ufuna umthengisi olungileyo. Sidwelise abathengisi be-oyile abahlanu abaphezulu ukuqhubela phambili kweli phepha. Uya kuthi urhwebe ioyile ngokudlula kwiiCFDs - ezibeka esweni ukutshintsha kwamaxabiso asethi. Ngenxa yoko, awunyanzelekanga ukuba uthathe ubunini bemigqomo yeoyile enkulu, enokuba yinto yamalungiselelo amabi.
Yintoni eqhuba iindleko zeoyile?
Ukuqonda ukuba yintoni eyenza ukuba ixabiso leoyile litshintshe kunokukunceda xa kufikwa kwinkqubo yokwenza izigqibo yorhwebo- kwaye kunjalo, ukwenza inzuzo.
Sele sichazile ukuba ixabiso layo nayiphi na i-asethi lithanda ukutshintsha ngenxa yokubonelelwa kunye nemfuno. Injongo yakho njengomrhwebi weoyile kukuzama ukubona kwangaphambili ukuba elo xabiso liza kunyuka okanye lihle.
Nceda ufumane apha ngezantsi uluhlu lwezinto eziphambili xa kuziwa kwixabiso lokurhweba leoyile.
Imiphanda yeoyile kwi-USD
Ioyile isetyenziswa kwaye ityiwa zizigidi kwihlabathi liphela yonke imihla kwaye ngokulula yenye yezona zinto zithandwayo kurhwebo. Idola yaseMelika nayo iyenzeka ukuba isetyenziswe kwaye ithengiswe ngezigidi kwihlabathi liphela.
Ioyile ihlala ithengiswa ngeedola zaseMelika ngomgqomo. Ngexesha lokubhala ngasekupheleni kuka-2020, oku kuma kwi-36.17 yeedola ngomgqomo omnye. Kule meko, uzama ukuqikelela ukuba ixabiso leoyile liza kuwa ngaphantsi kweedola ezingama-36.17, okanye linyuke ngaphezulu kwelo xabiso.
Njengoko uza kwazi kumzekelo wethu kweli candelo lingentla- nokuba uyenza okanye awuyenzi inzuzo xa ukhankanye utshintsho ngokuchanekileyo- kwaye ubeke iodolo efanelekileyo ngokufanelekileyo.
I-Brent kunye ne-WTI Crude Benchmark Indices
Iibhentshi ekubhekiswa kuzo ziyathelekiswa notshintshiselwano lwesitokhwe sangaphandle -bonisa ukuhla kwamaxabiso okubuza kunye namaxabiso. Kukho iibenchmarks ezininzi ezikhoyo, kwaye la maxabiso asekwe kunikezelo nakwimfuno, njengoko besichukumisile.
Ezona zalathiso zibalulekileyo zebhentshi yi-WTI ekrwada kunye neBrent ekrwada. Elokugqibela linqaku lesalathiso lenombolo 1 ngaphaya i-US. I-West Texas Intermediate (WTI) linombolo ye-1 yesalathiso Ngaphakathi i-US.
Zombini zineentshukumo ezifanayo zemarike, kodwa ixabiso lazo ngalinye liya kwahluka. Ukuba ioyile ingene kumhlaba ogqithileyo- oku kuya kuchaphazela zombini iibhentshi ngokungalunganga. Ngendlela efanayo, ukuba akukho oli iyaneleyo ibonelelweyo- ixabiso lesalathiso seoyile liya kunyuka.
Isiphithiphithi sezeNdawo kunye noNikezelo kunye neMfuno
Sikhankanyile ubonelelo kunye nokufuna amaxesha ambalwa sele, kungenxa yokuba yinxalenye enkulu yendlela ezixabiseke ngayo iiasethi. Xa kuziwa kwioyile ngokukodwa, ixabiso linokuchaphazeleka kakhulu kukuphazamiseka kwezopolitiko, ezinje ngoxinzelelo eMiddle East. Ungasathethi ke 'ngoMbutho waMazwe aThumela iiPetroli' (OPEC).
I-OPEC ikhokelwa yi-Saudi Arabia kwaye iqulethe amanye amazwe ali-14 atyebile ngeoyile. Kwimeko apho ungazi ukuba yintoni i-OPEC, umbutho uzinzisa iimarike zeoyile. Enye yeendlela eziphambili zokufezekisa oku kukulawula unikezelo kunye nebango leasethi.
Isetyenziswa njengendlela yokuzikhusela ngokuchasene nezigebenga zeoyile zase-US, i-OPEC ilawula intengiso ngokwenza imveliso yeoyile, isazi ukuba iya kubangela ukuba ixabiso lihle kubude. Ngokuchasene noko, lo mbutho unokucotha ngokulula imveliso yeoyile ukunyusa amaxabiso entengiso.
Ndingathengisa njani ioyile?
Ngoku ukuba unawo umxholo wentengiso yeoyile malunga nokuba ixabiso lentengiso liqhutywa njani kulo naliphi na icala- amathuba okuba ufuna ukwazi ukuba ungathengisa njani ngokwakho.
Ukurhweba ngeoyile: iiCFDs
Eyona ndlela ithandwayo kunye neyona ilula yokurhweba ngeoyile ihanjiswa ngumthengisi weCFD olawulwayo, njengalezo zidweliswe ngakumbi kwisikhokelo sethu.
Sichaze ukuba ukuthengisa ioyile ngeCFDs kuthetha ukuba awuyiyo eyakho iasethi esezantsi (kule meko yeoyile). Endaweni yoko, i-CFD ibeka esweni utshintsho lwamaxabiso okwenyani kwe-asethi- okwesibini ngesibini.
Xa kuziwa kwixabiso leoyile, abathengisi bakho beCFD baya kufumana ixabiso lemarike kwisalathiso sokulinganisa ioyile esaziwayo njenge-WTI okanye iBrent esele ikhankanyiwe.
Masikunike umzekelo okhawulezileyo wentengiso yeoyile yeCFD:
Amaxabiso emilinganiselo ye-WTI yeoyile ayi- $ 34.50
akho Urhwebo lweCFD iqonga ucaphula $ 34.50
Ukholelwa ukuba ixabiso leoyile liyakuwa endaweni thengisa iodolo enexabiso le- $ 200
Kwiintsuku ezi-3 kamva amaxabiso ebenmarkmark e-WTI ngama- $ 30.50
Ngokuhambelana nentengiso yakho yeCFD ikwaxabisa ioyile ngama- $ 30.50
Ubeka i kuthenga ukuze uphume kurhwebo
Uyenzile inzuzo nge-11.59% kule ndawo ye-CFD yeoyile
Abathengisi beoyile abangcono kakhulu abayi kuhlawulisa abathengi ngayo nayiphi na ikhomishini kwintengiso ye-CFD yeoyile. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa uya kuba nakho ukusebenzisa amandla okufikelela ukuya kwi-1: 10.
Oku kuthetha ukuba yonke $ 1 onayo kwiakhawunti yakho-ungarhweba nge- $ 10. Ngokubalulekileyo, ukunyusa kunokunyusa inzuzo yakho- kodwa kunye nelahleko yakho.
Ukuthengiswa kweoyile: Khetha
Ioyile inokuthengiswa kusetyenziswa 'ukhetho' ngokunjalo. Ukurhweba ngale ndlela kuthetha ukuba kusafuneka uqikelele ekunyukeni okanye ekuweni kwempahla yakho- kodwa kufuneka yenziwe ngaphambi kokuba ikhontrakthi iphele.
Ukuba i-oyile ekrwada unomdla kurhwebo emva koko kuya kufuneka wazi ukuba unayo kunene ukuthenga okanye ukuthengisa i-asethi, kodwa akunjalo inyanzelekile ukwenza njalo.
Nanku umzekelo okhawulezileyo wentengiso yeoyile usebenzisa iinketho:
akho iinketho Isivumelwano nomrhwebi seenyanga ezi-3
Ixabiso 'lesiteleka' kule khontrakthi yi- $ 60
Kuya kufuneka uhlawule 'i-premium' ye- $ 3 ukuvula ikhontrakthi
Kukho imiphanda engama-500 yeoyile ekrwada kwikhontrakthi nganye yokhetho
Unoluvo lokuba ixabiso leoyile liza kunyuka ngaphezulu kwe- $ 60- ngaphakathi kweenyanga ezintathu
Ngale nto engqondweni, uthenga ukhetho lokufowuna
Kuya kufuneka ubeke i-1,500 yeedola kule khontrakthi (i-500 * $ 3 yepremiyamu)
Ngoku, masithi kudlula iinyanga ezi-3 kwaye xa ikhontrakthi iphela ngeoyile ngamaxabiso ayi- $ 80. Le yi-20 yeedola ngaphezulu kwexabiso lakho lesitrayikhi leedola ezingama-40- siyakuvuyela, wenze uzuzo.
Inzuzo yakho yonke yi- $ 20 kwibhotile yeoyile
'Ipremiyamu' yakho yayiyi- $ 3 ke ngoko inzuzo yakho yomnatha iyi- $ 17 kwibhanti nganye
Unxibelelwano lwakho lokunxibelelana oluqulathe imiphanda engama-500- yiyo yonke ke inzuzo eyi- $ 8,500 (500x $ 17)
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ikhontrakthi yokhetho lwakho iya kuguquka kakhulu njengexabiso leoyile. Nangona kunjalo, uya kuba nakho ukulahla izivumelwano zakho nanini na xa ufuna-nangaliphi na ixesha phakathi komyalelo wakho wokuqala kunye nomhla wokuphelelwa kwesivumelwano sakho.
Ukuthengiswa kweoyile: Ixesha elizayo
Ii-CFD zilungile kwizicwangciso zokurhweba zexeshana elifutshane, kodwa ukuba unqwenela ukushiya urhwebo lwakho luvulekile okwethutyana ungakhetha kwixesha elizayo. Ixesha elizayo lihlala liza nomda wekhontrakthi weenyanga ezintathu, kwaye yonke ikhontrakthi inexabiso layo - umzekelo, iidola ezingama-3 kwibhotile yeoyile.
Kuninzi kwimeko ye iinketho -Ufuna ukuthelekelela ngokuchanekileyo malunga nokuba ixabiso liya kuba phezulu okanye libe sezantsi ekupheleni kwesivumelwano. Umahluko omkhulu phakathi iinketho kwaye kwixesha elizayo kukuba oku kokugqibela unyanzelekile ngokusemthethweni ukuba uthenge okanye uthengise iasethi ekubhekiswa kuyo ukuba usabambe ikamva xa liphela.
Njengoko kunokuba nzima ukufumana indawo yokugcina imiphanda yeoyile emininzi, kuyakufuneka ulahle ikontrakthi yeoyile yakho ngexesha elithile ngaphambi komhla wokuphelelwa!
Ukurhweba ngeoyile-Amacebo amathathu aDumileyo
Ukukwazi ukurhweba ngeoyile kwi-intanethi kunye nokwenza ingeniso engaguquguqukiyo kuya kufuna ukuba ube neendlela ezimbalwa zokuphakamisa umkhono wakho. Ukukunceda ukukhomba kwicala elifanelekileyo, apha ngezantsi uyakufumana iindlela ezithile ezithandwayo zokurhweba ngeoyile ezisetyenziswa ngabatyali mali abanamava.
Isicwangciso seoyile 1: Sebenzisa amanqanaba enkxaso
Amanqanaba enkxaso abonisa abathengisi 'amaxabiso aphambili amaxabiso' asethi ekuthethwa ngayo. Kule meko, injongo kukubonisa ukunganyangeki kwaye amanqanaba enkxaso kwimarike yeoyile.
Amanqanaba enkxaso sisixhobo esiluncedo kakhulu xa kufikwa kuthengiso lweoyile njengoko uza kufumana ukuqonda okuxabisekileyo ngamathuba okurhweba ngeoyile.
Umzekelo, ukuba ioyile iphakathi kwendlela esezantsi- unokwenza isenzo a yeka inqanaba. Oku kuyakuthintela ixabiso leasethi ekubeni linciphe nangakumbi.
Ngokungena kwimakethi ngentla komgca wenkxaso ngelixesha usenza isenzo a stop-ilahleko uku-odola phantsi komgca wenkxaso- uyakwazi ukunciphisa umngcipheko kwinqanaba elithile.
Isicwangciso seoyile 2: Ukucheba ioyile
Ukuba ujonga iinzuzo ezincinci rhoqo, ioyile ye-scalping inokuba yeyakho. Oku kubandakanya ukuvula ezininzi kuthenga kwaye thengisa ii-odolo kusuku olunye lokurhweba - okuthetha ukuba ungayenza le ntengiso ingazinzanga.
Indlela esebenza ngayo kukuba uyakube ujonge ukusebenzisa ithuba lokurhweba ngeoyile ngaphakathi kuluhlu lwamaxabiso aqinileyo. Umzekelo, masicinge ukuba ioyile ibithengisa phakathi kwe- $ 35 kunye ne- $ 38 ngomgqomo ngeentsuku ezininzi.
Uluhlu oluncinci lokudibanisa luvumela abathengisi abanesakhono ukuba bathenge rhoqo kwaye bathengise izikhundla phakathi kwala maxabiso mabini. Esi sicwangciso sokurhweba ngeoyile sisemngciphekweni ophantsi.
Emva kwayo yonke loo nto, umrhwebi uyazi ukuba ixabiso liya kuthi ekugqibeleni lenyuke nge- $ 38 okanye ngaphantsi kwe- $ 35. Ukulwa oku, baya kuba ne-odolo yokulahleka kokuyeka kuzo zombini iziphelo zoluhlu. Kude kube lelo xesha, umrhwebi weoyile unokufumana imali ixesha elide njengoko uluhlu lusekhona!
Isicwangciso seoyile 3: Ukurhweba ngokuTshintsha ioyile
Uluvo lokurhweba ngokuthengisa ioyile kukuhamba kunye nendlela ebanzi yentengiso usebenzisa iindlela ezahlukeneyo zohlalutyo lobuchwephesha. Injongo yokurhweba ngokuthengisa ioyile kukuzama kwaye usebenzise kuthenga ii-odolo xa isantya seoyile sisomelela- oko kuyakwenza ukuba ubambe ezo nzuzo.
Ngaloo nto engqondweni, abathengisi be-swing bangagcina izikhundla ezivulekileyo naphi na ukusuka kwiintsuku ezimbalwa ukuya kwiiveki ekupheleni. Ngobunzima, xa kubonakala ngathi imeko imalunga nokubuyela umva, umrhwebi ojijayo onobuchule uya kwenza izinto ezimbini. Okokuqala, baya kuphuma kwizikhundla zabo ukuze baqinisekise ukuba bayakwazi ukutshixa kwiingeniso ezenziwe kwinto ekuthethwa ngayo.
Emva koko, umrhwebi uya kuthi abeke enye into yokuthenga okanye yokuthengisa ukuze abambe imeko entsha. Kwakhona, urhwebo luya kuhlala luvulekile iintsuku, iiveki, okanye iinyanga ezimbalwa. Inqaku eliphambili kukuba bajonge ukuhlala neemarike ezibanzi ngokuchaseneyo nokubamba ii-swings zexesha elincinci.
Iimpawu eziBalulekileyo xa ufumana uMrhwebi oLungileyo weNtengiso yeoyile
Konke kulungile kwaye kulungile ukuba unolwazi lokuba ungayithengisa njani i-asethi ofuna ukugxila kuyo. Nangona kunjalo, njengoko besichazile, ufuna umrhwebi ukuze ukwazi ukufikelela kwiimarike zeoyile- kwaye wenze ii-odolo zakho egameni lakho.
Kukho amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi ababonelela ngeenkonzo zokurhweba ngeoyile. Ngelixa oku kuzwakala kumnandi, amaqonga okurhweba angakumbi akhoyo, kunzima ukuziphonononga ukuze ufumane eyona inkulu.
Sikugcinele umfuziselo womfuziselo kwaye senze uluhlu lweemetrikhi ezibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo xa ujonge ulungelelwaniso olufanelekileyo lweenjongo zakho zorhwebo.
Nokuba ungumtyali mali omtsha okanye ucinga ukuba ungumrhwebi onamava- sicinga ukuba ukusebenzisa i-broker ngokulula ukuhamba kwiwebhusayithi kwenza wonke umahluko.
Amanye amaqonga orhwebo abonelela abathengi konke ukucula yonke iwebhusayithi yokudanisa, elungileyo. Kodwa, kunokwenza kube nzima kakhulu ukufumana indlela yokuthengisa ioyile.
Ngokufanelekileyo, kuya kufuneka ujonge i-broker ngeqonga elihle elinomsebenzisi, kwaye leyo yenza ukuba ufumane iasethi oyifunayo kwaye ubeke ii-odolo zakho lula.
Azikho iifemu ezimbini zokurhweba kwi-Intanethi ezifanayo, ke xa ujonga iqonga elifanelekileyo kwiimfuno zakho zorhwebo-ayisiyiyo kuphela ukufikelela kwiimarike ekufuneka uziqwalasele.
IiKhomishini kunye neefizi zinokwenza i-dent enkulu kwiinzuzo zakho ukuba ukhetha iqonga lokuthengisa elingalunganga. Abanye abathengisi beoyile bahlawulisa ngaphezulu kwe- $ 10 kwintengiso nganye. Ngelixa oku kunokuba kuhle kwabo bathengisa izixa ezikhulu, ayizukubakho ukuba ufuna ukufikelela kwintengiso ngezibonda ezincinci.
Ngale nto ithethwayo, uyakufumanisa ngokubanzi ukuba iarhente yokurhweba ngeoyile ihlawulisa ikhomishini ngohlobo lweepesenti. Ukuba umrhwebi wakho ubiza i-1% yekhomishini, kwaye ubiza i-1,500 yeedola- kule meko, kuya kufuneka uhlawule umrhwebi wakho abe li- $ 15.
Oko kwathethi, ngoku ungaphefumla ukukhululeka- abarhwebi beoyile abangcono esixoxa ngabo kweli phepha banikezela abathengi urhwebo lwasimahla lweeCFD.
Kwimeko apho umtsha kurhwebo lweoyile, ngekhe wazi ukuba 'sasaza'umsantsa ophakathi kwe kuthenga Ixabiso leoyile, kunye thengisa Ixabiso leoyile. Incinci isithuba, kungcono kuwe njengomrhwebi. Akukho babarhwebi banye abalinganayo, ke jonga amaqonga orhwebo anokusasazeka okunganqwenelekiyo.
Protocol yokuHambisa kunye nokuRhoxa
Kuyacaca ukuba kufuneka ujonge ukubona ukuba zeziphi iindlela zokuhlawula ezikhoyo ngaphambi kokuntywila kwinkqubo yokubhalisa. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, sikhankanye ukuba abanye abathengisi banokwamkela kuphela iidipozithi zebhanki. Ke, ukuba unendlela yokuhlawula engqondweni-enje nge-debit / ikhadi lekhredithi okanye i-Paypal- ke kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba kudwelisiwe eqongeni.
Kukwabalulekile ukujonga ukuba ngaba kukho naziphi na iifizi ezihlawulelwa imali okanye ukurhoxa kwiakhawunti yakho. Ukuba usebenzisa iqonga lokurhweba ngeoyile elinezinga eliphezulu, awuyi kuhlawuliswa ngento oyifaka!
Njengoko ulapha ukufumana abarhwebi abathengisa ioyile ngoku, kulungile ukuba sichaze umgaqo. Ngokusayina kuphela namaqonga orhwebo aphethe iphepha-mvume elivela kwiqumrhu elilawulayo elinjenge-FCA okanye i-ASIC-unokuqiniseka ukuba uyazi ukuba ukhuselekile kubuqhetseba nakubarhwebi abangasebenziyo.
Le mibutho yolawulo yenzelwe ukugcina iimarike zorhwebo zicocekile kwaye zilungile kubo bonke. Abarhwebi abalawulwayo (njengabo bakuluhlu lwethu) kufuneka babambelele kwimithetho engqongqo eyahlukeneyo, omnye wawo 'ukwahlulwa kweakhawunti'. Kulabo abangaziyo, ukwahlulwa kweakhawunti kuthetha ukuba iimali zakho zokurhweba ziya kugcinwa kwiakhawunti yebhanki eyahlukileyo ngokupheleleyo kuleyo yenkampani yomrhwebi.
Ukurhweba ngeoyile kwi-Intanethi- Iingcebiso ezintlanu zokuphumelela
Kwihlabathi lokurhweba ngeoyile, awusoze wavezwa kwizicwangciso ezaneleyo, iingcebiso kunye namacebo. Ekupheleni kosuku, nantoni na ogqiba ekubeni uyisebenzise kwisicwangciso sakho kukuwe.
Nangona kunjalo, sidibanise ioyile ezintlanu iingcebiso zokuthengisa ukuze ucinge. Ndiyathemba ukuba oku kuyakunceda kwindlela yakho yokuba ngumrhwebi weoyile ophumeleleyo kwixa elizayo!
Gcina unolwazi ngeeNkcukacha zeOyile ezihlaziyiweyo
Ukugcina unolwazi ngazo zonke iindaba zeoyile kunye noqikelelo kuyakukunceda ekuqikeleleni ulwalathiso lwentengiso yeoyile. Emva kwayo yonke loo nto, intengiso yeoyile zixhomekeke kakhulu kwimfuno kunye nonikezelo.
Eli bango kunye nonikezelo lunokuthintelwa sisiphithiphithi sendawo okanye kwezemali. Kukho iimfumba zezixhobo zokurhweba kunye neewebhusayithi ezikhoyo zokukunceda ekufumaneni olu lwazi.
Sebenzisa imiqondiso yokuthengisa ngeoyile
Imiqondiso yokurhweba ngeoyile ifana nokunceda kwimisebenzi yakho yorhwebo. Abanye abathengisi abanalo nje ixesha lokuzigcina benolwazi ngeendaba zezezimali nezoqoqosho- singasathethi ke ngokugcina umkhondo wedatha yamaxabiso. Unoko engqondweni, imiqondiso yokurhweba ngeoyile inokuba sisithixo kubarhwebi abangenamava nabo.
Imiqondiso yokurhweba itshekisha iimarike ezingama-24/7 kusetyenziswa ubuchule obuphezulu kunye nesoftware ukuzama amathuba orhwebo anokufumana inzuzo. Yintoni eyenzekayo ngokulandelayo yingqondo-umboneleli uya kukuthumela umqondiso ophakamisa indawo yokungena nokuba kufanelekile kuthenga or thengisa.
Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa umqondiso ukwacebisa a stop-ilahleko inqaku, kunye nenqaku ngqo oya kuthi ngalo Thatha inzuzo. Le ayisiyiyo kwaphela indlela yokurhweba ngeoyile- nokuba ugqibe ekubeni wenze umqondiso ngumnxeba wakho.
Thina kuFunda u-2 wezoRhwebo sinikezela ngenkonzo yomqondiso opheleleyo ojolise kwi-forex nakwii-cryptocurrensets. Ngale nto ithethwayo, siyafumana amathuba okurhweba ngeoyile amaxesha ngamaxesha. Xa sisenza njalo, sazisa amalungu ethu ukuba sicinga ukuba zeziphi iindlela eziza kuhamba ngazo kwaye kutheni - konke ngexesha langempela ngeTelegram.
Iincwadi zokuThengisa ngeoyile
Kukho amakhulu eencwadi zokurhweba ngeoyile-ezifumaneka zombini kwifom yeencwadi ezindala nefashoni ebonakalayo, kunye nokumila kweencwadi ze-e, kunye neencwadi ezimanyelwayo. Unokuyiphunga ngokulula ikhrimu yesityalo ngokwenza uphendlo olulula kwi-intanethi 'ngeencwadi zokurhweba ngeoyile ezilungileyo'.
Zama iAkhawunti yeDemo
Ukuthengisa ioyile ngemali yamaphepha ngokuqinisekileyo yinto onokuyisebenzisa. Ayisiyiyo kuphela into onokuyithengisa kwindawo yentengiso yokwenene simahla, kodwa unokuziqhelanisa neendlela zokurhweba ngeoyile ngaphandle kokubeka imali yakho emngciphekweni.
Uninzi lwabathengisi beoyile be-CFD kwi-Intanethi banikezela abathengi ngeakhawunti yeedemo. Abanye bakunika isixa esichaziweyo ukuba uthengise ngaso- njengebhalansi yamaphepha ayi- $ 100,000. Oku kuqinisekisa ukuba unedemo eyoneleyo yokufumana iimarike zokurhweba ngeoyile ngaphambi kokubeka emngciphekweni imali yakho.
Thatha ithuba lokuThengisa ngeKopi
Ukukhuphela urhwebo akukho nto imfutshane kwimeko ye yorhwebo ntengiso isithuba. Kule mihla kukho ukhetho kwi ezinye Amaqonga orhwebo aza kukuvumela ukuba 'ukope' umtyalomali oqinisekisiweyo kunye nengxelo eqinisekisiweyo yorhwebo.
Uya kuba nokukhethwa kwabathengisi abakopiweyo onokukhetha kubo. Uninzi lujolise kwiimarike ezithile okanye zineepotifoliyo ezohluke ngokupheleleyo. Unokufumana ngokulula umrhwebi okhutshelweyo ngokukhangela enye enomdla weasethi njengawe.
Ke konke okufuneka ukwenze kukutyala imali ubuncinci obufunekayo ukuze 'ukope urhwebo' (kwi-eToro le yi- $ 200) kwaye ukhethe ukubonisa isipotifoliyo sabo. Beka ngokulula - ukuba batyale i-1.6% yeepotifoliyo zabo kwioyile ekrwada, eyakho ipotifoliyo yorhwebo iyakubonisa oku.
Abarhwebi abaPhambili beoyile
Ngoku ukuba uvule amehlo xa kufikwa kuthengiso lweoyile, kuyakufuneka ufumane umthengisi ukuze wenze iinjongo zakho zezemali zibe yinyani. Asikuthethi nje kuphela ngeendlela, iiodolo kunye neengcebiso- kodwa kunye neempawu ezibalulekileyo ekufuneka sijongile xa ukhetha umrhwebi.
Sineenkcukacha kubarhwebi beoyile bethu abahlanu abaphantsi ekuqwalaselweni kwakho, zonke ezo zilawulwa ngokupheleleyo kwaye zihlonitshwa kwindawo yoluntu.
1. AVATrade -Ii-CFD zeoyile ngoKhuphiswano oluSasazekayo
I-AvaTrade ibikwimeko engaphezulu kweminyaka eli-10 kwaye i-broker enelayisensi epheleleyo kwaye ilawulwa kwimimandla eyahlukeneyo enje ngeIreland, Australia, Canada, naseJapan - ukubala nje ezimbalwa.
Eli qonga lokurhweba libonelela ngeentlobo ngeentlobo ze-CFD ezimile nge-forex, ii-asethi ze-crypto, kunye nezinto ezifana nesinyithi kunye neoyile. Uya kufumana ukhuphiswano olusasazekayo eAvatrade xa uthengisa ii-CFD zeoyile.
Ukuba njengathi ukhetha ukuba nenketho yokwenza iodolo ekhawulezileyo ekuhambeni, okanye ujonge iakhawunti yakho njl.njl. Uhlelo lokusebenza lubizwa ngokuba yi 'AvaTradeGO' kwaye lwenza ukuba urhwebe kwaye ubeke idipozithi naphi na apho uqhagamshele kwi-intanethi.
I-AvaTrade ngomnye umrhwebi kuluhlu lwethu oluhambelana neMT4, iqela elikhulu lesorhwebo. Ukuba ungumrhwebi we-newbie okanye ubucinga ngokuzama iqhinga elitsha lokurhweba ngeoyile emva koko unokuvula iakhawunti yedemo yasimahla.
Ngale ndlela unokurhweba ngeakhawunti yokuthengisa ioyile egcweleyo ngaphandle kokubeka emngciphekweni imali yakho yeakhawunti kwangoko. Ungaqala ukurhweba ii-CFD zeoyile ngeAvaTrade ukusuka kwi- $ 100 encinci
Ukunyuka ukuya kuthi ga kwi-1: 20 kurhwebo lweoyile
2.Capital.com - Iikhomishini zeoyile zasimahla zeKhomishini
I-Capital.com, kufana ne-eToro esele ikhankanyiwe, yinto ekholisa isihlwele phakathi kwabathengisi beoyile abatsha. Iqonga lokurhweba lenziwe ngabatyali mali kuwo onke amanqanaba obuchwephesha engqondweni. Esona sikhokelo sishishina ngokuthengisa ioyile sifumene ukuba iqonga lokurhweba kwiwebhu lilula kakhulu ukuhamba nokuba ungumqali opheleleyo.
Kukho ngaphezulu kwezixhobo zokurhweba ngemali ze-3,000 ekunikezelweni kulo broker. Kwakhona, ngaba sichazile ukuba urhwebo lweoyile apha alunakhomishini? Xa kufikwa kusasazo olubaluleke kakhulu, i-oyile ekrwada yase-US inokurhweba ngokusasazeka kwe-0.04%. Konke okufuneka ukwenze kukukhetha isixhobo sakho semali, uthathe isigqibo sokuba ufuna ukubamba malini - kwaye ungaqala ukurhweba ngeoyile.
Iqonga lokuthengisa lenza abathengi ukuba bathengise ikamva leoyile njengeeCFD. Oku kusebenza ngendlela efanayo kwikamva eliqhelekileyo, ngaphandle kwenyani awuyi kuba yeyakho iasethi engaphantsi. Ukungabinayo i-asethi ayisiyonto imbi xa ucinga ngokuhambisa itanki yeoyile!
Njengoko besesitshilo, i-Capital.com ngumrhwebi ongenakhomishini, kwaye kuphela 'iifizi' oza kudibana nazo zibandakanyiwe ekusasazeni. Nangona ukongeza kuloo nto, umrhwebi uhlawula umrhumo wokungasebenzi kwe- $ 10- oku kuhlawuliswa kuphela ukuba awusebenzisanga iakhawunti yakho ukurhweba ngenzondelelo kwiinyanga ezili-12 okanye nangaphezulu.
I-Capital.com ilawulwa ngokupheleleyo yi-FCA, i-CySEC, i-ASIC, kunye ne-NBRB. Ubuncinci bediphozithi apha yi-$ 20 efikelelekayo kakhulu xa ufaka nge-e-wallets okanye debit / credit card.
Insiza enkulu yemfundo yee-newbies
Uhlalutyo oluncedo kunye nendawo yetshathi yamaxabiso
Zero ikhomishini yorhwebo ngeoyile
Iindlela zokurhweba azinakho ukuziqhelanisa
Uyivula njani iAkhawunti kunye noMrhwebi weNtengiso weoyile
Ukuvula iakhawunti kunye nomthengisi okwi-Intanethi kuhlala kuyinto elula kakhulu. Ngokubanzi, inokwenziwa phantsi kwemizuzu eli-10. Sidwelise apha ngezantsi amanyathelo amathathu alula ngendlela onokuthi uqalise ngayo kunye nomthengisi ozikhethele namhlanje.
Inyathelo 1: Ukhetho lokuNgena kunye noMrhwebi weNtengiso weoyile
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuya kwiwebhusayithi yomthengisi oyikhethileyo. Uya kudinga ukufaka iinkcukacha ezisisiseko malunga nokuba ungubani, njengegama lakho elipheleleyo, idilesi ye-imeyile, umhla wokuzalwa kunye nenombolo yomnxeba.
Ukucinga ukuba iqonga lokuthengisa linelayisensi ngumzimba olawulayo, kuya kufuneka ulayishe ikopi yencwadana yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba njengenxalenye yenkqubo ye-KYC (Yazi uMthengi wakho). Le yinkqubo esemgangathweni.
Inyathelo 2: Fundisa ngeAkhawunti yakho yokuThengisa ioyile
Nje ukuba uvule iakhawunti yakho kufuneka uyixhase, ukuze uqale ngokurhweba ngeoyile. Khetha ngokulula indlela yokuhlawula kwabo badweliswe eqongeni kwaye ufake imali onqwenela ukuyifaka. Ungalibali, uninzi lwabathengi abakwi-Intanethi bafuna ukuba uhlangane nomda wobuncinci wedipozithi.
Inyathelo 3: Beka uMyalelo wakho wokuqala
Njengoko uyazi, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngaba ixabiso leoyile liya kunyuka okanye lihle. Ukwenza oku, kuya kufuneka ubeke iodolo ku kuthenga or thengisa kunye nomthengisi wakho. Ingumbono olungileyo ukuvula iakhawunti yedemo ukuzama iqonga lokurhweba ngokwakho ngaphambi kokuba uqalise ukungena kwiakhawunti yakho yokwenyani.
Kwelinye icala, ukuba uziva ukulungele ukuqalisa ungaqala ngezibonda ezincinci. Oku kuya kunciphisa umngcipheko wokuqala ngelixa ujwayele iqonga lokurhweba.
Ukurhweba ngeoyile kuya kusanda minyaka le. Iyakwenza ukuba uxhamle ekunyukeni nasekuweni kwexabiso leasethi. Ukongeza kuloo nto, uninzi lwabarhwebi luyakukuvumela ukuba urhwebe ngegunya lokukhulisa inzuzo yakho yokurhweba ngeoyile.
Oku kuthetha ukuba isigxina se- $ 1,000 singakuvumela urhwebo oluphezulu lwe- $ 10,000. Ewe kunjalo, uxinzelelo kufuneka lusetyenziswe ngononophelo kuba lunokubaxa iilahleko zakho, ukuba awuchanekanga kuqikelelo lwakho lwentengiso.
Kukho iindlela ezahlukeneyo onokuthengisa ngazo ioyile. Nje ukuba ucinge malunga neenjongo zakho zokurhweba emva koko unokukhetha ukurhweba ngeoyile ngomthengisi wakho ngokulula.
Bonke abathengisi abarhwebi beoyile abadweliswe kweli phepha balawulwa ngokupheleleyo- ukuze uphumle ngokulula usazi ukuba ujongene nenkampani eyaziwayo kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi.
Uthengisa njani ioyile kwi-Intanethi?
Eyona ndlela ilula yokurhweba ngeoyile kwi-Intanethi kukusebenzisa umthengisi weCFD. Ii-CFD zibonisa nje ixabiso lehlabathi leoyile, ke oko kuthetha ukuba unokurhweba ngexabiso eliphantsi kwaye ungabinamthwalo.
Ngaba ioyile yegolide ndingayisebenzisa?
Ngokuqinisekileyo unako. Ukwenza oku, kuya kufuneka urhwebe ioyile ngeCFDs. Qaphela, inani lokuphakamisa onokufaka isicelo liya kuxhomekeka kwizinto ezahlukeneyo-ezinje ngelizwe lakho lokuhlala kunye nenqanaba lokurhweba (ukuthengisa okanye ubungcali). Kwiimeko ezininzi, abathengisi beoyile baya kulinciphisa inani lesixhaso onokuthi usisebenzise ku-1: 10.
Ngaba ndingathengisa ioyile simahla?
Uninzi lwabarhwebi beCFD likuvumela ukuba uvule iakhawunti yokuthengisa yedemo. Oku kuthetha ukuba unokurhweba ngeoyile ngendlela eyi-100% ngaphandle komngcipheko. Ke, xa uziva unezakhono ezifunekayo zokurhweba ngemali yokwenyani, unokuhlaziya ngokulula iakhawunti yakho yomrhwebi.
Utyala njani imali kwioyile ixesha elide?
Ukuba ujonge ukutyala imali kwioyile kangangeenyanga okanye iminyaka, ucetyiswa ukuba usebenzise i-ETF. I-ETF ekuthethwa ngayo iya kuthi ifikelele kuluhlu lwezixhobo zezezimali ezinxulunyaniswe neemakethi zeoyile- umzekelo, ikamva, ukhetho kunye nesitokhwe seoyile. Oku kuyakuvumela ukuba utyale imali kwixabiso leoyile ixesha elide ngaphandle kokuthotywa ngumrhumo weCFD.
Ngaba unako ukuhambisa ioyile?
Unokwenza ngokulula ioyile ngokusebenzisa indawo yokuthengisa yeCFD. Konke okufuneka ukwenze kukubeka iodolo yokuthengisa. Ukuba ixabiso leoyile liyehla emva koko, uyakwenza inzuzo.